सफल ईमेल सूची भाँडा र ईमेल न्यूजलेटर विज्ञापनको लागि गोप्यता
बिहीबार, डिसेम्बर 3, 2009 शनिबार, जून १,, २०१। स्कट हार्डडिग्री
नोट: यो पोष्ट सूची मालिकका लागि लेखिएको छैन। यो विज्ञापनदाताहरूको लागि लेखिएको छ जुन ईमेल सूचीहरू भाँडामा लिन्छ वा ईमेल न्यूजलेटरमा विज्ञापन गर्दछ। यदि तपाईं एक विज्ञापनदाता हुनुहुन्छ, वा योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंको मार्केटिंग मिक्समा तेस्रो-पार्टी ईमेल समावेश गर्न यसले च्यानललाई अधिक सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न र साना बजेटको साथ राम्रो आरओआई प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। अन्तमा, यसले सूची मालिकहरूलाई पनि मद्दत गर्दछ। सबै खुशीको विज्ञापनदाता एक दोहोर्याउने विज्ञापनदाता हुन्।
ईमेल मार्केटिंगमा मेरो वर्षहरूमा दुबै मा ईमेल मार्केटिंग एजेन्सी र ईमेल सूची भाडा साइड, मैले यस जस्तो केहि कुराकानी गरेको थिएँ, र म प्याराफ्रेज गर्दछु, "म मेरो अभियानहरू रद्द गर्दैछु किनकि मैले पर्याप्त पाइरहेको छैन [क्लिक, अग्रणी, बिक्री, वा अन्य ठोस परिणामहरू]। "विज्ञापनदाता त्यसपछि अभियान तान्छ र ईमेल सूची को प्रदर्शन संग निराश छोड्छ।
तर त्यहाँ उदाहरणहरू पनि छन् जब विज्ञापनदाता (वा तिनीहरूको एजेन्सी वा सूची दलाल) अभियान तान्नु अघि, तिनीहरू केही सानो समायोजन गर्न र पुन: परीक्षण गर्न इच्छुक थिए। र ती व्यक्तिहरू जसले एक पटक निराश महसुस गरे पछि अभियानको प्रदर्शनमा द्रुत सुधार देख्यो। मैले उनीहरूसँग एक सफल ई-मेल विज्ञापनको प्रयास गरिएको र साँचो गोप्य साझेदारी गर्‍यो, जुन यो हो:
तपाईंको अभियान उद्देश्यसँग तपाईंको रचनात्मक र सफलता मापदण्डहरू मिलाउनुहोस्।
हो। यो १०१ को मार्केटिंग हो, तर म तपाईंलाई भन्न सक्दिन कि मैले कति पटक देखेको छु कि उद्देश्य, रचनात्मक र सफलताका उपायहरू पूर्ण रूपमा गलत रूपमा मिसिएका छन्। र जब तिनीहरू हुन्छन्, अभियान कतै सफल पनि सकेको छैन। (नोट: अज्ञात कारणहरूको लागि यो गलत ईमेलमा अधिक प्रायः हुन्छ।)
शुभ समाचार यो हो कि यो सजिलो फिक्स हो जुन ईमेल मार्केटिंगको आरओआई चाँडै उल्टाउन सक्छ। जब ईमेल केन्द्रित अभियानलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, आफैलाई यी चार प्रश्नहरू सोधेर सुरू गर्नुहोस्:
यस अभियानका लागि मेरो लक्ष्य के हो?
के मेरो रचनात्मक र ल्यान्डि page पृष्ठ त्यो लक्ष्यको साथ पign्क्तिबद्ध हुन्छ?
के मेरो प्रस्ताव, रचनात्मक र ल्यान्डि page पृष्ठले मेरो श्रोतालाई अर्थ दिन्छ र मलाई मात्र होइन?
म कसरी अभियानको सफलता को नाप्ने, र यो लक्ष्य संग प ?्क्तिबद्ध गर्दछ?
तपाई के प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ? ब्रान्डि?? रेजिष्ट्रेसनहरू? एक बिक्री अनुसन्धान? तत्काल खरीद? तपाईको लक्ष्य जे भए पनि तपाईको सृजनात्मक, अवतरण पृष्ठ, र मापन सबै लक्ष्यसँग पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस् र श्रोताको दृष्टिकोणबाट अर्थ प्राप्त गर्नुहोस् (जुन तपाईको भन्दा अक्सर फरक हुन्छ)।
के तपाईंको लक्ष्य ब्रान्डि? हो? ईमेलले प्रभावकारी रूपमा मुख्य ब्रान्डिंग लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दछ: जागरूकता, सन्देश संघ, अनुकूलता, खरीद उद्देश्य, आदि। मैले फेला पारे कि प्रायः विज्ञापनदाताहरू, विशेष गरी जब ई-न्यूजलेटर विज्ञापनहरू प्रयोग गर्दछन्, ईमेल च्यानलमा ब्रान्डिंग विज्ञापनको साथ ठूलो सफलता हुन्छ। तिनीहरूका रचनात्मकहरू संलग्न छन्, तिनीहरूको ब्रान्ड प्रख्यात छ, र ती सन्देशहरू बल दिन्छन् जुन उनीहरू दर्शकलाई आफ्नो ब्रान्डको साथ संबद्ध गर्न चाहन्छन्। तर विच्छेदन, जब एक छ, तब आउँछ जब विज्ञापनदाता क्लिक वा केही अन्य मेट्रिक द्वारा अभियान मापन गर्दछ जब सृजनात्मक कहिल्यै त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया निकाल्ने उद्देश्य राख्दैन। ब्रान्डले प्रभावलाई मापन गर्दछ जुन अवलोकन (जस्तै एक प्रभाव) विज्ञापनले दर्शकको धारणा र उद्देश्यमा गर्दछ, तत्काल प्रतिक्रिया द्वारा होईन। यसको सट्टामा तपाईंको ब्यारोमिटरको रूपमा खुला दरहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाइँको वेबसाइट मा भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ वा नयाँ रेजिष्ट्रेसनहरू? महान! निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको रचनात्मकलाई त्यो प्रकारको प्रतिक्रिया हटाउनको लागि डिजाईन गर्नुहोस्। यदि तपाइँको विज्ञापन को सन्देश छ, "विजेटटाउन: वरिपरि सबै भन्दा राम्रो विजेट। अधिकको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। " तपाईंले सम्भावितहरूको ब्रान्ड धारणाहरूमा असर गरेको हुनसक्दछ, तर तपाईंले क्लिक गर्न सक्नुहुन्न। तिनीहरूले किन? तिनीहरूसँग आवश्यक सबै जानकारीहरू छन्, र सडक तल, यदि तिनीहरूलाई विजेट चाहिएको छ भने, उनीहरू तपाईंलाई कल गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तर तिनीहरू अहिले क्लिक गर्न गइरहेका छैनन् वा तिनीहरूलाई, त्रुटिहीन समयको भर्चुअल द्वारा, तत्काल आवश्यकता छ। यदि तपाईंको लक्ष्य पञ्जीकरण हो भने, दर्शकलाई क्लिक गर्न कारण दिनुहोस्। उनीहरूलाई केहि दिनुहोस् जुन साँच्चिकै मूल्यवान छ (तिनीहरूलाई)।
के तपाईको लक्ष्य लीड जेनरेशन हो? प्रोत्साहन र अवतरण पृष्ठ अब तपाइँको अभियान को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। के रचनात्मक ल्यान्डि page पृष्ठमा टाई गर्छ? के प्रोत्साहनलाई रचनात्मकमा प्रमोट गरिएको छ स्पष्ट रूपमा र प्रमुख रूपमा अवतरण पृष्ठमा देखाइएको छ? के यो ल्यान्डि page पृष्ठमा स्पष्ट छ (र ईमेल) सम्भावनाले अब के गर्नुपर्दछ, र प्रोत्साहन प्रबलित छ? त्यहाँ अवरोधहरू (नेभिगेसन, सामाजिक नेटवर्क लिंकहरू, इत्यादि) छन् जुन सम्भावनालाई कार्य पूरा गर्नबाट रोक्दछ? यी कुनै पनि एक नेतृत्व-उत्पादन अभियान को प्रभावकारिता कम गर्न र तपाईं उत्पन्न नेतृत्व को संख्या कम गर्न सक्नुहुन्छ।
हुनसक्छ तपाईंको लक्ष्य अनलाइन बिक्री हो। के यो त्यस्तो उत्पादन हो कि कोहीले आवेगमा किन्ने छ वा तपाइँको अभियानहरू घटनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, जस्तै छुट्टिहरू? के तपाइँ सम्पूर्ण चेकआउट प्रक्रिया पार गर्नुभयो? के यो सफा र सरल छ, वा विकृत र गुप्त छ? के तपाईं कार्ट त्याग ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाईं समस्या स्पटहरू कहाँ छन् भनेर देख्न सक्नुहुनेछ? के तपाईंको ईमेल सेवा प्रदायक (ESP) वा आन्तरिक ईमेल समाधान कार्ट त्याग ट्रिगर समर्थन गर्दछ? के तपाइँ आगन्तुकहरूको ब्राउजरहरूमा कुकी राख्दै हुनुहुन्छ ताकि यदि तिनीहरू केहि दिनमा फर्केर आउँदछन् र किनेका सामानहरू खरीद गर्छन्, तपाईं विज्ञापन क्रेडिट गर्न सक्नुहुनेछ जुन लिडहरू उत्पन्न गर्दछ?
खैर, एक अभियानको साथ बहु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यो एक futon जस्तै हुनेछ? यो एक धेरै राम्रो सोफा वा एक धेरै राम्रो ओछ्यान बनाउँदैन।
यी केवल केहि आधारभूत तर कहिल्यै उपस्थित कारकहरू हुन् जसले इच्छित कार्यहरूलाई असर गर्न सक्दछ र यसरी तपाईंको तेस्रो पार्टी ईमेल अभियानहरूको आरओआईको मूल्याation्कन। मात्र याद गर्नुहोस्, बीच र लाइन विपणन सफलता र ठीक एक मा सापेक्ष विफलता। यी सन्देशहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको सन्देशहरू र उद्देश्यहरू ईनलाईन छन् र तपाईं तत्काल ROI- मिटर तपाईंको पक्षमा चलाउन सक्नुहुन्छ।
टैग: निकोल केलीपोस्टटोली भवन